Ma dooran la heyd Madax aan Mudnayn? W/Q: Abdihakin A. Asir (Hadhwanaagnews) Saturday, August 11, 2012 Waxaa la wada ogsoon yahay in ummadda Soomaaliyeed guud ahaan aanan loo ogolayn inay dadka madaxda u noqon Waxaa la wada ogsoon yahay in ummadda Soomaaliyeed guud ahaan aanan loo ogolayn inay dadka madaxda u noqon lahaa ay dooran, waayo waxaa la yiri ama la isu sheegaa in ummadda Soomaaliyeedi diyaar aheyn oo aysan howshaas ballaaran aysan awoodi karin, weyna aqbaleen kuwa madaxda looga dhigay oo waxey dan u arkeen in ay iyagu soo magacaabaan mid madiidin u ah oo ay is lee yihiin waxa uu kuu fulin doonaa waxa aad rabto.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Waxaa marag ma doonta ah in ay
caalamka ka jiraan meelo badan oo innaga mashaakil badan hadana ummadahooda loo ogolaaday inay iyagu doortaan kuwa ay madaxda ka dhiganayaan, balse cabsi laga qabo in ummadda Soomaaliyeed xor looga dhigo inay doortaan kuwii iyaga matali lahaa, ayaa keentay in maanta la yiraahdo waxaan kuu magacaabeynaa kuwo sida xoolaha oo kale xilka u iibsada loogana iibsado markey mudane noqdaan oo lacagta ma ahane aanan wax kale wax ku miisaamin. Waxaanse halkaan idiinku soo gudbinayaa, Haddii fursadda na loo diiday aannu heli laheyn oo shacab ahaan awood naloo siin lahaa inaynnu xulanno kuwa wax noo maamulaaya qaabkii aannu ku xulan laheyn iyo calaamadaha uu yeelan lahaa qofka howshaas loo diraayo.
Waxaanse marka hore rabaa inaan ka afeefto akhristow haddii aad si indho la´aan ah aad u taageersan tahay musharax oo aadan jeclayn in hoos loo fiiriyo shuruudaha laga rabo qofka xilalkaan isu taagaaya, fadlan ha sii akhrinin qoraalkaan. Waxaa laga yaabaa inaad u akhrisato in qof kaas wax looga sheegaaayo, waxaana halkaan ka cadeynayaa inuusan qoraalkaani taageero u aheyn qof ama qolo gooni ah, balse uu tilaamaayo wixi uu ilaahey naga tusiyay, oo aan is lee nahay waa in qof loogu doortaa xil.
Marka intaas la helo oo ay timaado in la iska dhex raadiyo ninkii dalka garwadeenka ka noqon lahaa oo intaas oo dhan isku wedi lahaa magacaabina lahaa dhowlad tigaad iyo tayo leh, waxaa nafsadiisa laga rabaa inuu noqdo qof markiisa horeba yaqaanna, meesha uu u socdo iyo weliba waxa looga baahan yahay inuu qabto si looga dhamaado isqabqabsiga 12ka sano ee la soo dhaafay ummadda Soomaaliyeed faceed ka reebay. Madaxweynuhu waa inuu noqdaa qof leh qorsho siyaasadeed oo dadka iyo dalka u horseedi kara CADAALAD iyo NABAD. Si taas loo helana waa inuu marka horeba uusan madaxweynuhu aheyn qof difaacaya dano qaas ah iyo dano qolo gaar ah, kana madax bannaan fikirka ah maadaama aan madaxweyne ahay waxaan ahay, wax kasta oo waa inay wax kasta i hoos yimaadan, oo kan dhulka xaaqa ilaa kan ra´iisul waxaasaraha waxaan rabo haddii aan ka waayo waan ceyrinayaa.
Waa in qofka uu u dooranayo inuu Ra´isul wasaare u noqdo dowladiisa, uu yahay qof ay ku heshiiyeen qorshahiisa siyaasadeen, meelna marin kara wixi ay isku afgarteen oo aysan imaanin mar danbe is qabqabsi keena isjiijiidad iyo in dadku waayaan waxa ay filanaayaan. Waa inuu Madaxweynuhu noqdaa mid difaaca waxa uu isagu uu abuuru oo uusan noqonin mid isagu burburiya wixii wanaaga ahaa oo uu sameeyay si uu u helo wax uu isleeyahay dan ayaa kuugu jirta. Madaxweynuhu waa inuu noqdaa qof fiira dheer leh oo aanan fiirin waxa muuqda oo kaliya, diyaarna u ah in la saxo haddii ay wax ka sibiibaxdaan, mar kastana si hoose wax u saxa. Wax kastana ka hormariya danta guud, oo wax kasta uga hara horumarka dalka iyo dadaka Soomaaliyeed.